Imiklomelo Yomholi Wesikhathi Esizayo we-IWCA - Inhlangano Yezikhungo Zokubhala Zakwamanye Amazwe
SHAYELA IZICELO: Imiklomelo ye-IWCA Future Leader Scholarship Awards yango-2022
I-International Writing Centers Association (IWCA) izibophezele ekuhlinzekeni ngamathuba okuthuthukiswa kochwepheshe kumalungu abafundi bomphakathi wesikhungo sokubhala kanye nokuqaphela abafundisi bontanga kanye/noma abaphathi kunoma yiliphi izinga le-undergraduate kanye neziqu ababonisa amakhono aqinile obuholi kanye nentshisekelo ezifundweni zesikhungo sokubhala.
I-IWCA Future Leaders Scholarship izoklonyelwa kubaholi abane besikhungo sokubhala esizayo. Unyaka ngamunye kuzoqashelwa okungenani umfundi oyedwa oneziqu futhi okungenani oyedwa oneziqu uzoqashelwa.
Abafake izicelo abathola lo mfundaze bazoklonyeliswa ngo-$250 futhi bazomenywa ukuba beze esidlweni sasemini noma sakusihlwa nabaholi be-IWCA phakathi nengqungquthela yaminyaka yonke ye-IWCA.
Ukufaka isicelo, kufanele ube yilungu le-IWCA elinokuma okuhle futhi uhambise isitatimende esibhaliwe samagama angama-500–700 esixoxa ngentshisekelo yakho ezikhungweni zokubhala kanye nezinjongo zakho zesikhathi esifushane nezesikhathi eside njengomholi wesikhathi esizayo emkhakheni wesikhungo sokubhala. Thumela isicelo sakho nge leli fomu le-Google.
Isitatimende sakho singabandakanya ingxoxo yalokhu:
Izinhlelo zesikhathi esizayo zemfundo noma umsebenzi
Izindlela onikele ngazo esikhungweni sakho sokubhala
Izindlela ozithuthukisile noma ongathanda ukuzithuthukisa emsebenzini wakho wesikhungo sokubhala
Umthelela onawo kubabhali kanye/noma emphakathini wakho
Umfakisicelo uzichaza kahle kangakanani izinjongo zakhe zesikhathi esifushane ezinemininingwane eminingi.
Umfakisicelo uzichaza kahle kangakanani izinjongo zakhe zesikhathi eside ezinemininingwane.
Amandla abo okuba umholi wakusasa emkhakheni wesikhungo sokubhala.
Sicela uqondise noma yimiphi imibuzo (noma izicelo zalabo abangakwazi ukufinyelela ifomu le-Google) ku-IWCA Awards Co-Chairs u-Leigh Elion (lelion@emory.edu) kanye noRachel Azima (razima2@unl.edu).
Izicelo kumele zingakadluli umhlaka-1 Juni 2022.
UValentina Romero, eBunker Hill Community College